19 Oktobra 2007 à 8:42
Mananihany ahy ve ianao! fonosana matotra ve ity???? Mamoy fo ve izy ireo amin'ny varotra? Raha ny tena izy dia somary manjavozavo izy io ary eo amin'ny tavanao…tiako…fa tsy nino aho rehefa namaky azy.
Mahafinaritra izany. Izaho koa mpitsikilo. Hohaniko fotsiny ny kitapo miaraka amin'ny fonosana ary tsy tiako akory ny pretzel.
Mahira-tsaina, omeko azy ireo, fa ny mahira-tsaina tsy mandoa ny faktiora. Manontany tena aho raha miteraka famandrihana.
Ny Air Tran dia manana rafitra tsena/lalana voatokana, ka mety ho ezaka amin'ny fanatonana mpanjifa fotsiny izany, fa tsy ezaka amin'ny famoronana orinasa.
Alao sary an-tsaina ny hagagako rehefa nahita ny lahatsoratrao misy sarin'ny kitapo misy pretzel izay vao avy nohaniko andro vitsivitsy lasa izay tamin'ny sidina avy any Ohio ho any Orlando, Fla! Dokam-barotra mahagaga, sa tsy izany?
Raha ny marina, ity lahatsoratra ity dia fialan-tsiny tsara ho ahy hanoratana fanehoan-kevitra ho anao satria nanandrana nampiasa ny taratasy fifandraisanao aho mba hanontaniana anao ny antony mety hananako olana amin'izany ao amin'ny bilaogiko. Nangataka olona tsy tambo isaina aho handefa hafatra fitsapana ho ahy amin'ny alàlan'ny taratasinao saingy tsy mandeha izany noho ny antony. Tsy tonga amin'ny mailaka izany.
Ny hany azoko eritreretina dia ny mailaka apetrako ao amin'ny taratasy fifandraisanao dia ilay mailaka ampiasaiko ao amin'ny tontonana admin-ko. Izany ve no antony?
Koa satria tsy namaly ny hafatro tamin'ny alàlan'ny taratasy fifandraisanao ianao, dia manontany tena aho raha misy olana amin'izany ho an'ny olona rehetra, anisan'izany ny tenako izay mampiasa azy.
23 Oktobra 2007 à 7:29
Tsy azoko antoka izay mety ho olana. Alefaso amin'ny alàlan'ny taratasy ifandraisako miaraka amin'ny pejy handefasanao azy. Mampiasa ny fahafaha-mailaka WordPress ny plugin ka tokony handefa hafatra tahaka ny ataon'ny blôginao.
23 Oktobra 2007 à 7:49
Nanao araka ny nangatahinao aho ary nameno ny taratasin'ny fifandraisanao, tamin'ny fampiasana ny adiresy mailaka mahazatra ahy (stephen(at)sjhopson(dot)com raha ny marina dia nanandrana nifandray taminao tamin'ny alàlan'ny taratasinao aho fa tsy nahare valiny avy aminao. Mampanontany tena aho raha misy misy tsy mety amin'ny taratasy fifandraisanao.
Araka ny nosoratako tao amin'ny hafatro tamin'ny alàlan'ny taratasy fifandraisana, isaky ny nampiasa ny adiresy mailaka voalaza etsy ambony aho dia tsy nahazo ny hafany mihitsy ireo izay te hanatona ahy amin'ny alàlan'ny taratasy fifandraisanao ao amin'ny bilaogiko. Tsy nandray azy ireo mihitsy aho.
Na izany aza, rehefa nanova ny adiresiko ho sjhopson(at)yahoo(dot)com aho, dia tonga soa aman-tsara ny hafatra tamin'ny alalan'ny taratasy fifandraisanao tao amin'ny tranokalako.
Heverinao ve fa misy ifandraisany amin'ny hoe ny adiresin'ny stephen(at)sjhopson(dot)com dia ampiasaina ho adiresin'ny administratera? Mety misy ifandraisany ve izany?
Very hevitra aho, tsy fantatro hoe inona no misakana ahy tsy hampiasa ny adiresiko lehibe indrindra amin'ny mailaka: stephen(at)sjhopson(dot)com ho toy ny adiresy ampiasain'ny taratasy ifandraisanao handefasana hafatra.
23 Novambra 2009 à 6:49
Douglas, izaho koa dia nahavariana tamin'ny pretzel AirTran. Fomba hendry fotsiny hitazomana ny varotra, hafatra marika any ivelany.